Xildhibaanada Golaha Shacabka oo maanta shir yeelanaya – Kalfadhi
Waxaa lagu wadaa in maanta magaalada Muqdisho ay kulan ku yeeshaan Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya kulankaas oo baaqday muddo laba jeer ah. Guddoonka Golaha shacabka ayaa Xildhibaanada iyo Warbaahinta ku wargeliyay in kulanka maanta uu ka dhici doono xarunta fadhiyada Baarlamaanka ee Golaha Shacabka, waxaana Ajendaha uu yahay kuwii ka baaqday kulamadii hore.
Fariin qoraal ah oo lala wadaagay Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu yiri “Maanta oo taariikhda ku beegantahay 03/04/2019 waxaa jira kulanka guud ee Golaha Shacabka, Ajendaha ayaa ah Hadal-jeedinta Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo Dhageysiga Warbixinta Guddiga Dib u eegista Dastuurka”.
Labadii kulan ee ugu dambeysay ee Golaha Shacabka ayaa todobaadkii la soo dhaafay u baaqday Kooram la’aan waxaana maanta la soo sheegayaa in inta Xubnaha Golaha Shacabka ay xaadireen xarunta Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Fadhiga Baarlamaanka ee maanta wali waxaa ku sugan Xildhibaano aan ka laaban dalabkoodii ahaa in laga doodo arimaha amniga kuwaas oo mooshin ay ku dalbanayaan badelidda Ajendaha u gudbiyay Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.